[How to] Xiaomi MIUI ROMs မှာအသစ်ပါဝင်လာတဲ့ Screen Recorder အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန် | Than Dana
Home » Tools, Tips and Tutorials » [How to] Xiaomi MIUI ROMs မှာအသစ်ပါဝင်လာတဲ့ Screen Recorder အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်
[How to] Xiaomi MIUI ROMs မှာအသစ်ပါဝင်လာတဲ့ Screen Recorder အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်
In Tools, Tips and Tutorials On March 13, 2017
MIUI 8 မှာ မကြာသေးခင်ကမှထည့် MIUI 8 China Developer ROM နဲ့ MIUI 8 Global Developer ROM တို့မှာ စတင်သွင်းပေးလာတဲ့ New Features တခုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ Screen Recorder Apps ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း Apps ဟာ Native ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း အသုံးပြုရတာအဆင်ပြေလှပါတယ်။ Screen Recorder ဆိုတဲ့အတိုင်း မိမိတို့ဖုန်း Screen မှာပြုလုပ်သမျှကို Record လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး Video format အဖြစ် Saved လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၎င်း Screen Recorder Apps ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့ How to Guide လေးရေးသားပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
(၁) Recording စတင်ပြုလုပ်ဖို့ရန်အတွက် Screen Recorder Apps ကိုဖွင့်ပါမယ်။ Screen Recorder Apps ဟာ Home Screen မှာရှိတဲ့ Tools Folder အောက်ထဲမှာရှိပါတယ်။ အောက်မှာပုံလေးနဲ့ဝိုင်းပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
(၂) Screen Recorder Apps ထဲကိုရောက်တာနဲ့ Screen အောက်ဖက်နားမှာ အနီရောင်ခလုတ်လေးတခုရှိပါမယ်။ Screen Record စတင်ပြုလုပ်ဖို့အတွက် ၎င်းခလုတ်ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၃) Start ဆိုတဲ့ Popup တခု Screen ပေါ်မှာပေါ်လာပါမယ်။ Screen Recording စတင်ဖို့ရန်အတွက် ၎င်း Start ကိုနှိပ်ပြီး စတင် Record ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီခင်ဗျာ။
(၄) Recording စတင်ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း ၎င်း Popup ကို မိမိနှစ်သက်ရာ (အဆင်ပြေသည့်နေရာ) တွင် ရွေ့ပြောင်းထားနိုင်ပါသည်။ မိမိ Recording ပြုလုပ်ခြင်းပြီးဆုံးပြီဆိုပါက ၎င်း Stop Popup ကိုနှိပ်ပြီး Recording ပြုလုပ်ခြင်းရပ်နိုင်ပါသည်ခင်ဗျာ။
MIUI Screen Recorder Apps ရဲ့ Settings များအကြောင်း
Native Screen Recorder Apps နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး Settings ချိန်ဖို့ရန်အတွက် Settings > Additional settings > Record Screen ကိုသွားပါ။
MIUI Screen Recorder Apps ရဲ့ Record Resolution ဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် 1920 x 1080 (Default) ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း Resolution ကိုလျှော့ချလိုပါက Resolution settings မှာလျှော့ချပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
(၂) Video quality
Recording ပြုလုပ်ပြီး Output ထွက်လာတဲ့ Video quality ကိုပြုပြင်ချင်ပါက Video quality settings မှာဝင်ပြင်နိုင်ပါသည်။ Quality မြှင့်လေလေ Video output file size ပိုကြီးလာလေပါပဲခင်ဗျာ။
(၃) Frame rate
ပုံမှန်အားဖြင့် MIUI Screen Recorder Apps ရဲ့ Record frame rate က 24fps ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အကယ်လို့ ၎င်း Frame rate settings အတွင်းမှာ Frame rate ကို မြှင့်တင်ထားမယ်ဆိုရင် Recording ပြုလုပ်တဲ့ အရည်အသွေးပိုမိုကောင်းမွန်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Orientation နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်းဆို ၎င်း settings ဟာ Auto ပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း Orientation settings ဆိုတာ Video Capture ပြုလုပ်ခြင်းကို Portrait (သို့မဟုတ်) Landscape Mode စသဖြင့်ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
(၅) Sound Source
Recording မှာပါဝင်မယ့် အသံနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ settings ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဖုန်းရဲ့ Internal sound (သို့မဟုတ်) Mic/ Surrounding sound (သို့မဟုတ်) Mute စသဖြင့် ၎င်း settings မှာပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
(၆) Lock Screen to end
၎င်း Lock Screen to end settings ဆိုတာ Screen Recording ပြုလုပ်ခြင်းကို ရပ်ဖို့ရန်အတွက် Power button/ Lock button အသုံးပြုပြီး ရပ်နိုင်ဖို့အတွက် settings ချိန်ညှိဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
(၇) Show touch gestures
ဒီ settings ကတော့ Screen recording ပြုလုပ်စဉ်အတွင်း Touch ကိုထိတဲ့အချိန်မှာ Pointer/ White dot ပေါ်အောင် ချိန်ညှိနိုင်တဲ့ settings ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Recorded videos မှာ Screen Touch လုပ်တာတွေကို White dot လေးနဲ့ဖော်ပြဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
(၈) Visualize navigation buttons
ဒီ settings ကတော့ Screen recording ပြုလုပ်နေစဉ်မှာ Naviagtion buttons တွေကို ထိတွေ့တာနဲ့ သက်ဆိုင်ရာထိတွေ့လိုက်တဲ့ (Menu, Home, Back) ကို Recording ရဲ့ အောက်ခြေမှာ စာတိုလေးတွေနဲ့ ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Recording ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း Home Key နှိပ်သလား? Menu Key နှိပ်သလား? Back Key နှိပ်သလား? စသဖြင့် သိရှိနိုင်ပါသည်။
Ref: Source 1 | Source 2
Topics: Comprehensive Guide MIUI Tips and Tricks
Previous Post Xiaomi မှထုတ်လုပ်ထားသော Smartphones, Tablet များ၏ Device Codename များ
Next Post Xiaomi ဟာ သူ့ရဲ့ Music Library ကိုချဲ့ထွင်ဖို့ရန်အတွက် Warner Music နဲ့ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုး